Ahoana no fomba ahafahako manamboatra profil-pifandraisana lavorary ho an'ny tranokalako?
Inona no endriky ny backlink? Mampalahelo fa tsy mety ny fefy, satria ny profesora "ide" dia tsy tokony hampidirina rohy tsotra fotsiny. Midika izany fa tsy mety ho lasa hetsika azo fehezina tanteraka ity dingana ity eo amin'ny rohy tsirairay. Eto ambany eto ny lisitra sasantsasany hodinihina. Mino aho fa hanampy anao izy ireo mba hahatonga azy ireo ho akaikin'ny sehatra ahafahana mamaky lalindalina araka izay azo atao. Midika izany fa ny tranokalan-tserasera dia hitombo avo lenta kokoa noho ireo teny fototra ifantohan'ny lasibatra noho ny mpifaninana akaiky anao indrindra. Na izany na tsy izany, misy tsipika ambany ho an'ny orinasan-tserasera maoderina rehetra, sa tsy izany?
Voalohany indrindra, ny manakaiky kokoa ny profiles "idealy" dia midika hoe manalavitra ireo zavatra ratsy indrindra toy ny fananganana rohy mifandray, fampiharana amin'ny finday rohy, Ny votoatin'ny blaogiko indrindra amin'ny hetsika spamming. Raha tadidinao fa tsy ny isam-piraketana tokana rehetra, fa ny tranonkala manontolo backlink manontolo dia mila fanaraha-maso henjana amin'ny ankapobeny, diniho ireto soso-kevitra sy soso-kevitra manaraka ireto:
Toa hita fa mibaribary fotsiny amin'ny rohy manerantany ny mombamomba ny backlink tsara. Midika fa ny paikadim-pifandraisan'ny rohy dia tsy miankina afa-tsy amin'ny pejy web be mpanaraka indrindra, azo atokisana ary manana mari-pankasitrahana. Tadidio - zavatra tena manan-danja ny fahafantaranao. Aza manary ny fotoanao sy ny ezaka ataonao amin'ny rohy fako rehetra izay tsy azo ihodivirana ny fanoheranao ireo avo lenta avoakanao, na eo aza ny fiantraikany amin'ny votoatin'ny tranonkala amin'ny fomba tena manimba.
Ny iray amin'ireo resaka mampikorontana indrindra eto dia ny lahatsoratra fanodikam-peo. Tsy ilaina ny milaza fa ny fampidirana ireo rohy amin'ny rindrankajy manan-danja manan-danja dia ekena ho anisan'ny fomba matanjaka indrindra hikolokolo kokoa amin'ny teny fototra na teny fototra. Na izany aza, dia tsy ho ampy izany rehetra izany. Raha ny tena marina, ny profil -pitsaboana tsy manam-pitenenana tanteraka anao dia mila karazan-doko fanoratana rehetra hita any amin'ny tranonkalanao. Amin'izany, tandremo fa ireo lahatsoratra farany vita am-pilosinao dia voamarika fa tsy amin'ny teny filamatra afa-tsy ny karazana soratra masina hafa mifandraika amin'ny foto-kevitra ankapobeny.
Andao hiatrika izany - Ny fanorenana ny "idealy" ny rindran-drakitra dia tsy ho vita tanteraka. Midika izany fa ezaka maharitra sy maharitra tsy tapaka mikendry hahazoana rohy vaovao hatrany. Raha ny marina, na dia ireo tranonkala manam-pahaizana indrindra aza dia miditra an-tendrony amin'ny valin'ny fikarohana Google dia tokony hahazo vaovao tsy tapaka. Raha tsy izany, ny fifandraisan-tànana ataony amin'ny fananganana trano dia tsy azo ihodivirana amin'ny fampihenana ny fisehoana an-tserasera amin'ny SERP.
Aza hadinoina izany - lasa ela be. Ny kalitao, fa tsy be loatra. Tsy ilay teboka intsony intsony izao, satria ny mombamomba ny lisitry ny rohy rehetra sy ny endri-pitenenana dia tokony hihoatra lavitra noho ny siansa sy ny tranonkala. Raha jerena ny fiheveran'ny rohy ho an'ny fiaraha-miasa ampahibemaso rehetra, dia jereo ny zavatra rehetra amin'ny ankapobeny misy ny votoaty ao amin'ny tranonkala, ary inona marina no votoatin'ny sora-baventy efa misy. Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana fitaovana an-tserasera toy ny SEMRush, na ny Analytaly Semalta dia afaka mametraka ny zava-drehetra ho mora kokoa, farafaharatsiny ny momba ireo olana manan-danja toy ny teny manan-danja mahaliana, loharanom-baovao an-tserasera, Source .